Sidee Email U Dhex Galayaa Suuqgeynta Kanaal Badan | Martech Zone
Xilligan iyo maanta, suuqgeyntu waa wejiyo badan. Laga soo bilaabo baloogyada ilaa warbaahinta bulshada illaa macluumaadka loo soo diro emaylka, waxaa muhiim ah in dhammaan farriimahayagu ay is waafaqsan yihiin oo isku dhafan yihiin. Waxaan helnay sanado badan e-maylku inuu udub dhexaad u yahay suuq geyn farabadan.
Waxaan la shaqeynay asxaabteena Delivra si aan u abuurno macluumaadkan ku saabsan sida iimaylku uga caawiyo suuqleyda inay xoojiyaan oo ay isku koobaan farriintooda suuq geynta. Ma ogtahay in 75% dadka isticmaala baraha bulshada ay u tixgeliyaan emaylka inay yihiin fariinta ay doorbidayaan ee xiriirka shirkadaha. Taasi waa weyn. Emailku waa suuq-geyn ku saleysan rukhsad, taas oo macnaheedu yahay in macaamilka ama rajadu ay go'aansan karaan inay ku shaqeeyaan shuruudahooda. U adeegsiga warbaahintan habka saxda ah waxay si weyn u wanaajin kartaa beddelaadyada, gaar ahaan marka loo oggolaado rajada in la xusho oo la doorto sida ay u doonayaan inay u hawl galaan.
Caqabadaha Suuqgeynta Emailka
Mid ka mid ah caqabadaha na soo food saaray ayaa ah inaan la socono suuqgeynta emailkeena. Waxaan leenahay emayl suuq geyn sannadkan dhammaan jadwalkayaga mashquulka ah, laakiin waxaan dhowaan bilownay inaan markale dirno. Furaha emaylka suuqgeyntu waxay leedahay maalin iyo waqti cayiman oo aad u dirto emaylkaaga. Jadwal u samee waqtiga kalandarkaaga si aad u hubiso inaad ka koobantahay waxyaabahaaga iyo naqshadeyntaada loo qabtay ololaha emaylkaaga usbuucaas. Abuur jadwalka mawduuca, mawduuc loogu talagalay emaylkaaga, iyo siyaabaha loo hagaajiyo emaylkaaga. Qorshayntu waxay u egtahay inay horseeddo ficil.
Haddii aadan isticmaalin suuqgeynta iimaylka, markaa runti waa inaad sifiican ugu fiirsataa dhag-siinta iyo kaqeybgalka laga yaabo inaad lumiso. Ka fikir taas - dadka badankood waxay hubiyaan emaylkooda maalin kasta. Maxaad u isticmaaleysaa suuqgeynta iimaylka? Sideed u isticmaali laheyd suuqgeynta emailka? Kuwani waa su'aalaha qaarkood oo ay tahay inaad isweydiiso urur ahaan.
Sideed ugu isticmaashaa emaylka howlaha suuqgeynta badan ee kanaalka?
Tags: suuqgeynta ololahaOlolayaashaEmail MarketingMacluumaadka Suuqgeyntasuuq geyn farabadan
Jan 9, 2013 saacadu markay ahayd 7:26 PM
Waad ku mahadsantahay dhajinta tan Jenn!
Faahfaahin wanaagsan, laakiin waxaan dhihi lahaa emaylku waa kanaal iskiis u saxan, xogta macaamiilkuna waa waxa isku xira kanaallada.